Tereesaa May ennaa bakka gabaa London daawwatanitti deggertoota mormitootaan mormiin irratti dhiyaate. Duula filannoo cimaa ta’eef yeroo rakkisaa dha. Haleellaaleen sadii baatii lama keessatti erga raawwatamee booda Theresaa May dhimma kana ajendaa kanneen safuutti cichanii godhanii jiru.
Yoo seerri mirga namaa keenya akka hin goone nu dhaabsisa ta’e, jijjiirree kana gochuu qabna jedhan.
Yaadi isaan dhiyeessan kun hoogganaa garee mormituu kan Labour Partii Jeremy Corbyn biraa qeeqa dhaqqabsiise.
Malli ittiin ati balaa dimokraasii irra ga’u dhaabsistu dimokraasii gad xiqqeessuu dhaan miti. Balaa sana dura dhaabachuu dhaani. Sana jechuun poolisii keenya fi tajaajila naga eegumsaa sirriitti maallaqaan deggeruu dhaani jedhan.
Yaadi uummataa paartiin kanneen safuutti cichaniinii akka injifatu mul’isa. Garuu guyyoota dhiyoo dorgommii qabxii walitti siqeenya qabuutu geggeessamaa jira.
Toora sadaffaa irra kan jiran dimokraatota yaada madaalawaa qaban kanneen London gamtaa Awrooppaa keessaa ba’uu mormani. Xiinxaltoonni akka jedhanitti biyyattiin fuula duratti tarkaanfataa jirti.
Paartiin walabummaa UKf falmu amma dhabamee jira. Kanneen yaada uummataa walitti qaban akka jedhanitti Briteen gamtaa Awrooppaa keessaa ba’uun murteeffamuu waliin kanneen paartii kanaa sagalee kennan hedduun gara paartii warra safuutti cichaniitti goraniiru.
Tereesaa May akka jedhanitti marii waa’ee Briteen keessaa ba’uu irratti dhiibbaa gochuuf sagalee ol aanaa argachuu akka qaban beeksisan.
Paartiin warra socotlaand “Scottish National party” ka jedhamu UKtti adda ba’uuf rerferedumiin lammataa akka geggeessamu gaafataa jira.
Uummati Scootlaand hedduun garuu jedhan Kevin, bara 2014 murteeffatan waan ta’eef battala referendumii geggeessuu hin fedhan.
Mana Murtii Itoophiyaa: Murtii Kennuuf Yeroo Dabalataa Nu Barbaachisa
Ittiin Ka’umsi Waraana Sudaan Kibbaa Furamuu Qaba: Miseensa Mana Maree Ameerikaa